Gavanaha nairobi oo ku gudi baara uxil saaray wiil yar oo kudhintay isbtaalka maam lucy kibaki | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Gavanaha nairobi oo ku gudi baara uxil saaray...
Gavanaha nairobi oo ku gudi baara uxil saaray wiil yar oo kudhintay isbtaalka maam lucy kibaki
Gavanaha magaalada caasimada ah ee nairobi dr Evens kidero ayaa gudi baara dhacdadii wiilka yaraa uu ugu dhintay isbitaalka mama lucy maalinimadii khamiista u xil saaray in ay baaritaan ku sameyaan.
Dominic Otieno oo sadex bilood jir ahaa ayaa xanuun ugu geeriyooday isbitaalka mama lucy kibaki xilli la doonayay in loo qaado isbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi.
Mr kidero ayaa sheegay in ay wajihi doonaan maxkamadeyn sarakiisha caafimaadka ee isbitaalkaasi hadii ay cadaato in wiilka yar ee sadex billod jirka uu u geeriyooday daryeel la,aan soo wajahday.
Dadka ku nool nairobi ayuu ugu baaqay in ay is dajiyaan iyadoo durbaba bilaabatay baaritaanka arimahan la xiriira.
Agaasimaha wasarada caafimaadka ee dowlad goboleedka garisa Bernard Muia ayaa dhankiisa sheegay in sadex gaari oo nooca lagu daabulo dhaawacyada ee loo yaqaan ambulance ay ciladoobeen halka xiligaan isbitaalka uu heesto hal gaari oo kaliya walow aan si rasmi ah la ogeyn in arintaasi ay la xiriirto.
Gavanaha nairobi ayaa sheegay in ay dowladiisa ay ku dadaaleyso sidii ay goobaha caafimaadka ku heli lahayeen adeegyada laga marmaanka u ah howlahooda sida daawada iyo gawarida.